UNontlalo-ntle, umKatolika nomSilamsi | IBhayibhile Iyabutshintsha Ubomi Babantu
IBHINQA elalingenamdla kuThixo nelalinomsebenzi owanelisayo layifumana njani eyona njongo yobomi? Yintoni eyafundwa ngokufa ngumfana ongumKatolika neyenza ukuba atshintshe indlela awayephila ngayo, yaye yintoni eyenza ityendyana lomfana elalingonwabanga lifunde into ngoThixo eyalenza langumshumayeli? Khawuzivele ukuba bathini.
“Kangangeminyaka Bendizibuza Ukuba, ‘Kutheni Silapha?’”—ROSALIND JOHN
UNYAKA WOKUZALWA: 1963
UBOMI BANGAPHAMBILI: NDANDINOMSEBENZI OWANELISAYO
Ndazalelwa eCroydon, kuMazantsi eLondon, ndingowesithandathu kubantwana abalithoba. Abazali bam babeziinzalelwane zakwisiqithi zeCaribbean eSt. Vincent. Umama wayengumWisile. Ndandingenamdla wakufunda ngoThixo, nangona ndandinomqweno wokufuna ukwazi ongade waneliswe. Ngeeholide zesikolo bendiye ndihlale ngasechibini, ndifunde iinqwaba yeencwadi endiziboleke kumzi weencwadi.
Emva kweminyaka ndigqibe isikolo, ndaba nomnqweno wokunceda abantu abatsala nzima. Umsebenzi wam yayikukunceda abantu abangenamakhaya, abaneziphene nababengakwazi ukufunda. Ndaya kufunda inzululwazi ngezempilo eYunivesithi. Emva kokuba ndithweswe isidanga, ndabanomsebenzi ohlawula ngendlela encumisayo ndaza ndaphila ubomi obutofotofo ngeyona ndlela. Njengomcebisi nomphandi ngezentlalo, inye nje kuphela into eyayifuneka ukuze ndenze umsebenzi wam yilaptop. Bendikwazi ukuhamba kangangeeveki ndiye kumazwe aphesheya, ndihlale kwiihotele ezithandwa ndim, ndingqongwe ziindawo ezintle ezibangela umdla, ndibe kwelinye icala ndizilolonga ukuze ndibe sempilweni ndize ndigcine nenkangeleko. Ndandicinga ukuba bobona bomi obo. Kodwa andizange ndibatyeshele abo babehlelelekile bengenakuzinceda.
Kangangeminyaka bendizibuza ukuba, ‘Kutheni silapha, yaye yintoni injongo yobomi?’ Kodwa andizange ndizidube ngokufuna iimpendulo eBhayibhileni. Ngeny’ imini ngo-1999, udadewethu omncinci uMargaret, owaba liNgqina likaYehova wandwendwela ekhaya ehamba nomhlobo wakhe naye owayeliNgqina nowabanomdla kakhulu kum. Ndazibona sendivuma ukufunda iBhayibhile nomhlobo wodade wethu, nangona ke oko kwathath’ ixesha, kuba umsebenzi wam nendlela yokuphila yayithatha ixesha lam elininzi.
Ngehlobo lwango-2002, ndafudukela kumzantsi ntshona weNgilani. Apho, ndaye ndongeza kwizidanga zam, ndinosukelo lokuba ekugqibeleni ndibe ngugqirha kwezokuphanda ngezentlalo. Ndaqalisa ukuya rhoqo kwiHolo yoBukumkani nonyana wam oselula. Nangona ndandinemfundo ephakamileyo, ukufunda kwam iBhayibhile kwandiphendulela imibuzo emininzi ngeengxaki zobomi kwaza kwandinika nesicombululo. Ndamfumanisa eyinyaniso uMateyu 6:24, othi awunakukhonza iinkosi ezimbini, kuba isenokuba nguThixo okanye ubutyebi. Ndandisazi ukuba ekugqibeleni kwakuza kufuneka ndenze isigqibo ngezinto eziza kuqala ebomini.
Kunyaka ongaphambili, ndandisiya rhoqo kwisazulu apho amaNgqina ayefunda incwadi ethi Is There a Creator Who Cares About You? * Ndaye ndiyeseka ukuba nguYehova umdali wethu kuphela, onesicombululo kwiingxaki zoluntu. Ukanti, eYunivesithi ndandifundiswe ukuba ubomi obunenjongo abunanto yakwenza nokukholelwa kubukho boMdali. Yandicaphukisa gqitha loo nto, kangangokuba emva kweenyanga ezimbini ndasiyeka isikolo ndaza ndachitha ixesha lam elininzi kwizinto zonqulo.
Ivesi yeBhayibhile eyandikhuthazayo ukuba ndenze utshintsho yincwadi yeMizekeliso 3:5, 6: “Kholosa ngoYehova ngayo yonke intliziyo yakho, ungayami ngokwakho ukuqonda. Uze umgqale yena ezindleleni zakho zonke, kwaye uya kuwenza uthi tye umendo wakho.” Ukufunda ngoThixo wethu onothando kunomvuzo ngakumbi kunezidanga eziliwaka nobunewunewu beli hlabathi. Njengoko ndandifunda okungakumbi ngenjongo kaYehova ngomhlaba nendima eyadlalwa nguYesu yokuncama ubomi bakhe ngenxa yethu, ndafuna ngamandla ukuzahlulela kuMdali wethu. Ndaye ndabhaptizwa ngo Aprili 2003, ndaza emva koko ngokuthe ngcembe ndabenza lula ubomi bam.
Ubuhlobo bam noYehova abunakuthelekiswa nanto. Ndifumene uxolo lwangaphakathi novuyo lokumazi. Ndiye ndonwaba nangakumbi ngokunxulumana nabanquli bokwenyaniso bakaThixo.
Ukunxanelwa kwam ulwazi kuqhubeka kusaneliswa njengoko ndiqhubeka ndifunda iBhayibhile yaye ndisiya nakwiintlanganiso zamaKristu. Kuyandivuyisa ukuxelela abanye ngeenkolelo zam. Ngowona msebenzi wam lo, wokunceda abantu babe nobomi obungcono ngoku baze babe nethemba lobomi kwihlabathi elitsha. Ukususela ngoJuni wama 2008, ndiye ndakhonza ixesha elizeleyo, yaye ndinovuyo nolwaneliseko olungathethekiyo kunangaphambili. Ndinombulelo ongazenzisiyo kuYehova, kuba ngoku ndiyifumene eyona njongo ngobomi.
“Ukufa komhlobo wam kwandishiya ndibamb’ ongezantsi.”—UROMAN IRNESBERGER
UNYAKA WOKUZALWA: 1973
UBOMI BANGAPHAMBILI: UMNGCAKAZI
Ndakhulela kwidolophana yaseBraunau, eOstriya. Loo ndawo yayinabantu abafumileyo, kwaye nolwaphulo mthetho lwaluphantsi. Ekhaya sasingamaKatolika.
Andisoze ndiyilibale into eyenzeka ngo-1984, xa ndandineminyaka eli-11 ubudala. Ndikhumbula ndidlala ibhola nomhlobo wam osenyongweni. Ingaphelanga loo mini, umhlobo wam wasutywa kukufa kwingozi yemoto. Ukusweleka kwakhe kwandishiya ndibamb’ ongezantsi. Yaqengqeleka iminyaka emva kwaloo ngozi, ndizibuza ukuba kwenzeka ntoni ekufeni.
Ukugqiba kwam esikolweni, ndasebenza njengegcisa lezombane. Nangona ndaye ndachewulwa kukungcakaza ndibheja ngeemali ezinkulu, andizange ndibe neengxaki zemali. Ixesha lam elininzi ndandilichithela kwimidlalo, ndithanda nomculo onesingqi esingxolayo. Yayiba ngumjuxuzo emva komnye ndandibuthanda ubumnandi nobomi obuvakalala kodwa sekunjalo ndandingonwabanga.
Ngo-1995, iNgqina elalisele liliqina lankqonkqoza emnyango laza landinika incwadi eyayiphendula umbuzo osekelwe eBhayibhileni othi, Kwenzeka ntoni kuthi ekufeni? Ukufa ngesiquphe komhlobo wam kwakusandikhathaza ngenxa yoko ndayithatha le ncwadi. Andizange ndanele nje ukufunda isahluko esithetha ngokufa kodwa ndayifunda yonke!
Oko ndakufundayo kwayiphendula imibuzo endandinayo ngokufa. Kodwa ndafunda okungakumbi. Ekubeni ndakhula ndingumKatolika, ndandikholelwa kakhulu kuYesu. Noxa kunjalo, ukufunda kwam iBhayibhile ngokucokisekileyo kwandinceda ndahlakulela ubuhlobo obusondeleyo noYise kaYesu uYehova uThixo. Kwandichulumancisa gqitha ukwazi ukuba uYehova usikhathalele yaye ufuna simazi. (Mateyu 7:7-11) Ndafunda ukuba uYehova uneemvakalelo nokuba, uyema elizwini lakhe. Oko kwandenza ndanomdla onzulu kwiziprofeto zeBhayibhile nakwinzaliseko yazo. Izinto endazifundayo zomeleza ukholo lwam kuThixo.
Ngokukhawuleza ndaqonda ukuba ngamaNgqina kaYehova kuphela anomdla onyanisekileyo wokunceda abantu baqonde iBhayibhile. Ndazikrwelela izibhalo ezikwiincwadi zamaNgqina ndaza ndazihlola kwiBhayibhile yam yamaKatolika. Njengoko ndandiphanda nzulu ndaye ndaqonda ukuba ndiyifumene inyaniso.
Ukufunda kwam iBhayibhile kwandifundisa ukuba uYehova ulindele ukuba ndiphile ngemilinganiselo yakhe. Oko ndakufunda kwabase-Efese 4:22-24, kwandenza ndaqonda ukuba kuza kufuneka ndilahle “ubuntu obudala,” obabubangelwa “yihambo yam yangaphambili” ndize “ndambathe ubuntu obutsha obadalwa ngokokuthanda kukaThixo.” Ngoko ndayitshintsha indlela endiphila ngayo, ndayeka nokungcakaza okungunobangela wokunyoluka nokusukelana nobutyebi. (1 Korinte 6:9, 10) Ndandisazi ukuba ukuze ndenze olo tshintsho, kwakuza kufuneka nditshintshe abahlobo bam bangaphambili ndize ndinxulumane nabantu abaphila ngemilinganiselo efana neyam.
Kwakungelula ukwenza olo tshintsho. Kodwa ndaqalisa ukuya kwiintlanganiso zamaNgqina kwiHolo yoBukumkani ndaza ndazenzela abahlobo ebandleni. Kwakhona ndaqhubeka ndizifundela iBhayibhile. Loo manyathelo andiqhubela ukuba ndenze utshintsho kumculo endandiwumamela, kwizinto endandizisukela ebomini, nakwinkangeleko yam. Ngo-1995, ndaye ndabhaptizwa njengeNgqina likaYehova.
Ngoku ndinembono elungeleleneyo ngemali nangezinto eziphathekayo. Bendikade ndingumabizw’ asabele ndinomsindo osempumlweni, kodwa ngoku ndiyakwazi ukuzibamba. Andisaxhalabanga ngokugqith’ emgceni ngekamva.
Ndiyakuthanda ukuba yinxalenye yabantu abakhonza uYehova zwenibanzi. Phakathi kwabo ndibona abantu abazamana neengxaki kodwa sekunjalo bakhonza uThixo ngokuthembeka. Kuyandivuyisa ngokwenene ukunikela ngamandla am, kungekhona ukuze ndizanelise kodwa, ekukhonzeni uYehova nokwenzela abanye izinto ezilungileyo.
“Ekugqibeleni ubomi bam bunenjongo.”—UIAN KING
UBOMI BANGAPHAMBILI: BENDIKADE NDICINGA UKUBA BUBOMI
Ndazalelwa eNgilani, kodwa xa ndandineminyaka esixhenxe ubudala, safudukela eOstreliya. Apho safikela eGold Coast, indawo ethandwa ngabakhenkethi eQueensland. Nangona ekhaya sasingezo zityebi, sasingaswelanga nto.
Phezu kwako nje ukukhula tofotofo, ndandingonwabanga. Ubomi bam ngaxa lithile bakhe ababinantsingiselo, ndaphelelwa lithemba. UTata wayeyindlamanzi. Ndandingasondelanga kangako kuye, ngenxa yokusela kwakhe nangendlela awayemphethe ngayo umama. Kamva, ndaye ndazi ngezinto ezamehlelayo xa wayelijoni eMalaya, ndaza ndasiqonda isizathu sokuba ubuntu bakhe bubenje.
Ndaqalisa ukusela ngamandla ngoxa ndandisafunda kumabanga aphezulu. Ekufinceni kwam iminyaka eli-16 ubudala, ndasiyeka isikolo ndaza ndaba lijoni lomkhosi waselwandle. Ndaqalisa kancinane kwiziyobisi kwaye ekugqibeleni ndaba yingendle yecuba. Ndaba ngumtya nethunga nebhothile, kwakungadlul’ impela veki ndingaselanga. Ekugqibeleni ndandisela yonke imihla.
Xa ndandimalunga neminyaka engama-20 ubudala, ndabuthandabuza ubukho bukaThixo. Ndandiqiqa ngelithi ‘ukuba uThixo ukho ngokwenene, kutheni ebayeka abantu bebandezeleka baze bafe?’ Ndade ndabhala umbongo ogxeka uThixo ngabo bonke ubungendawo obukhoyo ehlabathini.
Ndawushiya umkhosi waselwandle xa ndandinama-23 eminyaka ubudala. Emva koko, ndaqeshwa kwimisebenzi eyahlukahlukeneyo ndaya naphesheya kweelwandle kangangonyaka, kodwa kuko konke oko ndandisamatshekile ndiphelelwe lithemba. Ndandingenamnqweno wakuzibekela sukelo nakufeza nto, yonke nje into yayingabangel’ umdla. Amabhongo okuba nendlu eyeyam, umsebenzi osisigxina, nokwenyuselwa konke oko kwakuyinkcitha xesha. Inye nje into “eyayindithuthuzela” ndandiziselela utywala bam ndimamele nomculo.
Ndisikhumbula kakuhle isihlandlo endaye ndanqwenela ngamandla ukufumana injongo yobomi. Xa ndandisePoland ndandwendwela kwiinkampu zoxinaniso zodumo eziseAuschwitz, kuba ndandifundile ngenkohlakalo eyayiqhubeka kuzo. Kodwa xa ndabona ubukhulu benkampu, ndaphazamiseka kakhulu. Ayizange indicacele into yokuba kungakho abantu abakhohlakalela abanye ngolo hlobo. Ndikhumbula ndihamba hamba ndizibambe ngeenkophe iinyembezi, ndizibuza, ‘Bekusekutheni?’
Ekubuyeni kwam phesheya ngo-1993, ndaqalisa ukufunda iBhayibhile ndifuna iimpendulo. Kamsinyane nje kamva, ndandwendwelwa ngamaNgqina amabini awandimemela endibanweni eyayiza kuba kwibala lemidlalo elalingekude kwindawo endandihlala kuyo, ndaza ndaya.
Ndandikhe ndaya kwelo bala kwiinyanga ezingaphambili ndiyokubukela umdlalo, kodwa indibano yayahluke kakhulu. AmaNgqina ayechubekile enxibe ngokundilisekileyo, nabantwana bawo bezolile. Kwandikhwankqisa oko ndakubona ngexesha lekhefu. Amakhulu khulu amaNgqina ayetyela emabaleni, kodwa xa ayebuyela ezihlalweni zawo, ibala lalicoceke ngeyona ndlela! Phezu kwako konke oko, aba bantu babebonakala benolwaneliseko noxolo—izinto endandizinqwenela ngamandla. Andinakukuxelela oko kwathethwayo ngaloo mini, kodwa indlela awaziphatha ngayo amaNgqina andinakuyilibala.
Ngaloo ngokuhlwa, ndaye ndacinga ngomzala wam owayefunda iBhayibhile nowayephum’ engena kwiinkonzo ezahlukahlukeneyo. Kwiminyaka engaphambili, wakhe wandixelela ukuba, uYesu wathi unqulo lokwenyaniso lwaluza kubonakala ngeziqhamo zalo. (Mateyu 7:15-20) Ndaqonda ukuba okungenani makhe ndijonge oko kwenza amaNgqina ahluke kangaka. Kwakukokokuqala ebomini bam, ukuba ndibe nethemba.
Kwiveki eyalandelayo, la maNgqina ayendimemele endibanweni andityelela kwakhona. Andicela ukuba ndifunde nawo iBhayibhile ndaza ndavuma ndaza ndaqalisa nokuya kwiintlanganiso zamaKristu kunye nawo.
Njengoko ndandifunda iBhayibhile, imbono yam ngoThixo yatshintsha ngokupheleleyo. Ndafunda ukuba ayinguye obangela ubungendawo nokubandezeleka nokuba ubabuhlungu xa abantu besenza izinto ezimbi. (Genesis 6:6; Ndumiso 78:40, 41) Ndazimisela ukuzama ngandlela zonke ukuba ndingaze ndimenze buhlungu uYehova. Ndandifuna ukuyenza ibe nemihlali intliziyo yakhe. (Mizekeliso 27:11) Ndayeka ukuziphatha kakubi, ukutshaya ndaza ndayeka nokuya ngamandla emphandeni. NgoMatshi 1994, ndabhaptizwa njengeNgqina likaYehova.
Ndivuya ngeyona ndlela yaye ndanelisekile. Andithi ndakuvelelwa ziingxaki ndibalekele etywaleni, kunoko ndiye ndafunda ukulahlela umthwalo wam kuYehova.—INdumiso 55:22.
Kule minyaka ilishumi idlulileyo, ndiye ndatshata neNgqina eliyinzwakazi uKaren, kwaye sihlelisene kakuhle nentombi yakhe uNella. Sobathathu siyakunandipha ukuchitha ixesha lethu elininzi kubulungiseleli, sinceda abanye ukuba bafunde inyaniso ngoThixo. Ekugqibeleni ubomi bam bunenjongo.
^ isiqe. 11 Ipapashwe ngamaNgqina kaYehova.
IBhayibhile Iyabutshintsha Ubomi Babantu—Novemba 2012